टेक रिभ्यु Archives - Living with ICT
Home / टेक रिभ्यु
तपार्इं इन्टरनेटमा बसेर आफूलाई चाहिएका सेवासुविधा र वस्तु खोज्दै हुनुुहुन्छ भने पक्कै भेटिन्छ डटकमको प्रयोग गर्नुहुन्छ । गत जनवरी १५ मा स्थापना भएको आइटी कम्पनी बिल्कुलै नयाँ स्वादसहित आएको छ । नेपालमा फरक शैलीमा लोकल सर्च इन्जिनको रुपमा सुरु भएको भेटिन्छ डटकमले छोटो समयमै लोकप्रियता कमाएको छ । तपाईं पनि लोकल सर्च इन्जिनको यो रिभोलुसनको एक भाग बन्न सक्नुहुनेछ । …
२०७४ भाद्र १८, काठमाडौं रसियन कम्पनी क्यास्परस्की ल्याबका नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सागर टेक्नोलिङ्कले नेपाली बजारमा अनुमानित ६० प्रतिशत भन्दा एण्टीभाइरस प्रयोगर्ताहरुमाझ लोकप्रिय रहेको क्यास्परस्कीको नयाँ भर्सन सार्बजनिक गरेको छ । अत्यधिक डिजिटल सेक्युरिटीका लागि डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटपका साथै म्याक कम्प्युटर, एण्ड्रोइड स्मार्टफोन एवं आईफोन,आईप्याडमा पनि प्रयोग हुने क्यास्परस्की एण्टीभाइरस सफ्टवेयरको नयाँ २०१८ संस्करणहरु सार्बजनिक भएको हो । कम्पनिले स्परस्की इन्टरनेट …
नेपालमा अनलाइन भुक्तानीको नया समाधान: नेप्जी
नेपालको प्रविधि क्षेत्र प्रत्येक दिन बिस्तारै तर निरंतरका साथ विकास तर्फ आगाडी बढ्दै छ । प्रत्येक दिन नया स्टार्टअप, एप र विचारहरु जारी र शुरू हुदैछन् र हामी बिस्तारै संसार को पछि जादै छौ । पछिल्लो केही वर्ष प्रगतिका वर्ष थिए. यी वर्ष भर, नेपालमा प्रविधिले आईटी र अनलाइनको क्षेत्रमा नयाँ उपलब्धिहरू गर्यो । अनलाइन कारोबार मुख्य क्षेत्र हो …
के तपाईँ विदेश जाने सोचिरहनु भएको छ तर जानकारीहरू कहाँबाट लिने भन्ने थाहा पाउनुभएको छैन ? के तपाईँको परिवारको सदस्य तथा साथीहरू विदेशमा छन् र उनीहरूलाई कुनै पनि तरिकाले सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ ? अथवा तपाईँ विदेशमै हुनुहुन्छ र नेपाल फर्किएर केही गर्न चाहानुहुन्छ ? यदि त्यस्तो हो भने वैदेशिक रोजगारमा जाने सोच भएका, विदेशमा रहेका तथा नेपाल फर्किन चाहने सबै नेपालीहरूलाई …